Mayelana ne-JDL - JDL Global Environmental Protection, Inc.
Amanzi aguquguqukayo futhi angazishintsha ngezimo zangaphandle, ngasikhathi sinye, amanzi amsulwa futhi alula. I-JDL ikhuthaza isiko lamanzi, futhi inethemba lokusebenzisa izici eziguquguqukayo nezimsulwa zamanzi kumqondo wokwelashwa kwamanzi angcolile, futhi ivuselele inqubo yokwelashwa kwamanzi angcolile ibe inqubo eguquguqukayo, yokonga izinsiza kanye nemvelo, futhi inikeze izixazululo ezintsha embonini yokwelashwa kwamanzi angcolile.
I-JDL Global Environmental Protection, Inc., etholakala eNew York, iwusizo lweJiangxi JDL Environmental protection Co, Ltd. (stock code 688057) Ngokuya ngobuchwepheshe be-FMBR (Facultative Membrane Bio-Reactor), inkampani ihlinzeka ngezinsizakalo zamanzi angcolile ukwakhiwa nokwelashwa, ukutshalwa kwephrojekthi yokwelashwa kwamanzi angcolile, i-O & M, njll.
Amathimba obuchwepheshe we-JDL abandakanya ababonisi abanolwazi lokuvikelwa kwemvelo, onjiniyela basemkhakheni, onjiniyela bakagesi, onjiniyela bokulawulwa kwamaphrojekthi kanye nonjiniyela be-R & D bokunakekelwa kwamanzi angcolile, asebenze ekwelapheni amanzi angcolile kanye ne-R & D iminyaka engaphezu kwengu-30. Ngo-2008, i-JDL yathuthukisa ubuchwepheshe be-Facultative Membrane Bioreactor (FMBR). Ngokwesenzo sezinto ezincane eziphilayo, lobu buchwepheshe buqaphela ukonakala ngasikhathi sinye kweCarbon, iNitrogen, nePhosphorus kusixhumanisi esisodwa sokuphendula esinokukhishwa okuncane okuyi-organic sludge ekusebenzeni kwansuku zonke. Ubuchwepheshe bungasindisa ngokuphawulekayo utshalomali oluphelele lwephrojekthi yokukhucululwa kwendle kanye nokungcolisa, kunciphise kakhulu ukukhishwa kwendle eyinsalela, futhi kuxazululwe ngempumelelo i- "Not in My Backyard" kanye nezinkinga zokuphatha eziyinkimbinkimbi zobuchwepheshe bendabuko bokwelashwa kwendle.
Ngobuchwepheshe be-FMBR, i-JDL ibonile ukuguqulwa nokwenziwa ngcono kwesikhungo sokuhlanza indle sisuka ezikhungweni zobunjiniyela kuya kumishini ejwayelekile, futhi saqaphela indlela yokulawula ukungcoliswa endle “yokuqoqa, ukwelapha nokusetshenziswa kabusha kwamanzi angcolile”. I-JDL ibuye futhi ngokuzimela ithuthukise uhlelo lwe- "Internet of Things + Cloud Platform" oluphakathi kanye ne- "Mobile O&M Station". Ngasikhathi sinye, kuhlanganiswe nomqondo wokwakhiwa "kwezindawo zokuhlanza indle ngaphansi komhlaba kanye nepaki engaphezulu komhlaba", ubuchwepheshe be-FMBR bungasetshenziswa nasendaweni yokuhlanza amanzi angcolile ehlanganisa ukusetshenziswa kwamanzi angcolile nokuzilibazisa kwemvelo, inikeze isisombululo esisha semvelo yamanzi ukuvikelwa.
Kuze kube nguNovemba 2020, i-JDL ithole amalungelo obunikazi bokusungula angama-63. Ubuchwepheshe be-FMBR obusungulwe yile nkampani buphinde bathola imiklomelo eminingana yamazwe omhlaba, okubandakanya i-IWA Project Innovation Award, iMassachusetts Water Energy Center's Wastewater Treatment Innovation Technology Pilot Grant, kanye ne-American R & D100, nabalinganiswa "njengamandla okuba ngumholi wokuqhamuka ukuphathwa kwendle ngekhulu lama-21 "yi-URS.
Namuhla, i-JDL ithembele emisha yayo nasekuholeni kobuchwepheshe obuyisisekelo ukuqhubekela phambili ngokuqinile. Ubuchwepheshe be-JBR ye-FMBR busetshenziswe kumasethi emishini engaphezu kwama-3,000 emazweni ayi-19 kubandakanya i-United States, i-Italy, iGibhithe njll.
Iphrojekthi Yomklomelo We-IWA
Ku-2014, ubuchwepheshe be-JBR ye-FMBR buwine i-IWA East Asia Regional Project Innovation Award for Applied Research.
I-R & D 100
2018. Ubuchwepheshe be-JBR ye-FMBR buwine Imiklomelo ye-America R&D 100 ye-Special Recognition Corporate Social Responsibility.
Iphrojekthi ye-MassCEC Pilot
Ngo-Mashi 2018, iMassachusetts, njengesikhungo samandla ahlanzekile emhlabeni wonke, yafuna iziphakamiso esidlangalaleni ngobuchwepheshe obusha bokusika amanzi angcolile emhlabeni jikelele ukuqhuba abashayeli bezindiza bezobuchwepheshe eMassachusetts. Ngemuva konyaka wokukhetha nokukala okunzima, ngoMashi 2019, ubuchwepheshe be-JBR ye-FMBR bakhethwa njengobuchwepheshe bephrojekthi ye-WWTP ye-Plymouth Municipal Airport.